मालपोतमै कर लगाउ, स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क गर
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल---
मालपोत कार्यालय भूमाफियाको अखडा बनेको छ । भूमाफियाको दबाबमा कित्ताकाट खोलिने, बन्द हुने, व्यापक प्लटिङ हुने र हाउजिङहरुको खरिद बिक्री पनि व्यापक बढिरहेको छ ।
मालपोतमै कर लगाइदेउ ।
र, शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गर, यसो भयो भने स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय सरकारको हुनेछ । अस्पताल सरकारको हुनेछ र सरकारले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा दिनसक्नेछ, अहिलेजस्तो प्रभावशाली र प्रभावहीनका लागि बिभेद रहनेछैन ।
महामारीमा पनि भ्रष्टाचार । कस्तो सरकार हो यो । सरकारको काम, त्यो पनि लोकतन्त्र चलाउने सरकारको काम लोककल्याणकारी हुनुपर्छ, भ्रष्ट कल्याणकारी होइन ?
दुई तिहाइको सरकार चलेको ३३ महिना भयो, ३ वटा काम पनि लोकमैत्री हुनसकेको अवस्था छैन । जेजति काम भएका छन्, भ्रष्ट मैत्री, व्यभिचार मैत्री, नातागोता मैत्री, माफियामैत्री काममात्र गरेको छ यो सरकारले । यस्तो सरकार पनि दुई तिहाइको सरकार भन्न सुहाउँछ, यो सरकार त जनमत, जनबल, जनताको विश्वासको खेलबाड गर्ने सरकार हो ।
यस्तो सरकार हुनु र नहुनुमा लोकका लागि केही फरक पर्दैन । अझ नहुनुमा लोकको कल्याण होला, भएर लोकमाथि शोषणभन्दा बढी केही भएको छैन ।
दुई तिहाइको सरकार भनेको संविधान जति पनि संशोधन गर्नसक्ने अधिकारसहितको सरकार हो । यो सरकारका सामु कुनै पनि व्यवधान छैनन्, यो सरकार त हाई हाई भएर चल्नुपर्ने सरकार हो । तर जतिखेर पनि पार्टी झगडाले सरकार ग्रस्त छ । नैतिकहीन र संविधानको भावना विपरितका काम गरेर सरकार बदनाम भएको अवस्था छ । यस्तो सरकारले जनताको अपेक्षा संवोधन गर्न सक्दैसक्दैन । यो सरकारको ध्यान विकासमा हुनुपथ्र्यो, उद्यम बढाउनेमा हुनुपथ्र्यो, रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्ताग्रस्त देखिनुपथ्र्यो । यो सरकार त कति बढी देशमा युवालाई रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ भनेर पो सोच्छ । यो सोचहीनता हो ?
स्वास्थ्यमा माफिया, शिक्षामा माफिया । संवैधानिक पदहरुको पदस्थापनामा माफिया । संसदमा माफिया, सरकारमा माफिया । सरकार बदल्न माफिया, सरकार बनाउन र पुनर्गठनमा माफिया । माफिया हावी हुनु भनेको जनता र देशमाथि घातक प्रहार हो । यस्तो नैतिकहीनता दुई तिहाइको बहुमतमा ? दुई तिहाइको बहुमतले के ग¥यो भन्दा उही सपना बाँडेको छ, सपना बाँड्नु भनेको सोम शर्मा हुनु हो, काम केही भएकै छैन ।
काम देखिनुपर्छ, कामको मूल्यांकन हुने हो । जनता गाँस, बास, कपासका लागि छटपटिएका छन् । बाँडेको भात खाएर बाँचेका छन् । सरकार फूलवर्षा गराएर राजस्व खेर फालिरहेको छ । संविधान दिवस पछि मनाए हुन्छ, गणतन्त्र दिवस पछि मनाए हुन्छ, पहिले जनताको जीवन रक्षा गर्नुप¥यो । पहिले जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा पाउनुप¥यो । यसतिर दुई तिहाइको सरकारले सोचेको देखिदैन ।
आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, सर्वहारावादी भन्ने अनि स्वास्थ्य र शिक्षामा माफियातन्त्र चलाउने ? योभन्दा गए गुज्रेको कम्युनिष्ट कहाँ हुन्छ ?
कम्युनिष्ट नामधारीहरु चरम पुँजीवादका प्रतिनिधि पात्र हुन्, यिनीहरुभन्दा धनाध्ये त अरु कोही पनि छैनन् । त्यो धन आयो कहाँबाट ? केही वर्षअघिसम्मका चप्पलछापेहरु आज महल, गाडी, महाराजाजस्ता बनेका छन् । यो शानशौकत भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाउनेहरुले यसरी प्रगति गर्दारहेछन् । देश रसातलतिर भासिदो छ, टाक्सिदो छ, नेताहरु यसरी खाइखाँदै धनाध्ये बन्दै गएका छन् । नेता सेवक हुनुपर्ने हो, नेपालका सन्दर्भमा मालिक बनेका छन्, विचारकहरु विचार गर ।